ग्यालमरस फिल्म शुटिंग स्पोट ‘मुस्ताङ’ - Jukson.com
Headline Title onlyमनोरन्जनमनोरन्जन फिचरमनोरन्जन समाचार
Jukson१८ श्रावण २०७७, आईतवार १८:२२ मा प्रकाशित
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ ! धेरैको लागि रहस्यमय नै छ । विस्तारै मानवीय पाईला बढ्दै गएको छ । यातायातको सहज पहुँज छ । यातायातले मुस्ताङलाई सबैको सहज पहुँच पुर्याइएको दिएको छ । यातायातको सहजतासँगै न्यु लोकसेन सबैको मनमष्तिकमा पस्छ । जति हेरेपनि हेरिरहन मन लाग्ने लोभलाग्दो भूबनोट छ । फरक हावापानी छ । एक शब्दमा भन्नु पर्दा ‘मुस्ताङ’ ग्यालमरस छ ।
‘जोमसोमे बजारमा, १२ बजे हावा सरररर’ नेपथ्य व्याण्डको गीतले भने झैं जोमसोम साँझ र विहान निकै शान्त हुन्छ । १२ बजेपछि हावा चल्छ । त्यो जोमसोमको विशेषता नै हो । त्यसभन्दा अलि माथि पुगेपछि ताल छ । ढुम्बा ताल । जुन प्राकृतिक दृष्टिकोणले निकै सुन्दर छ । अझ माथि पुग्यो मुक्तिनाथ मन्दिर । जहाँ धार्मिक पर्यटकको आगमन वर्षेनी हुने गरेको छ । अर्कोबाटो लम्किदाँ उपल्लो मुस्ताङ पुगिन्छ । जहाँ फरक भौगोलिक संरचनाले मनै लोभ्याउँछ ।
न्यु लोकेसनले पछिल्लो समय फिल्मीकर्मीको गन्तव्य बन्दै गएको छ मुस्ताङ । म्युजिक भिडियोदेखि गीतको सामान्य दृष्य खिच्नेमात्रै भएपनि मुस्ताङ आउने गरेका छन् । चलचित्र ‘ऐश्वर्य’को गीतको सुटिङ मुस्ताङमा गरिएको छ । त्यसपछि फिल्म ‘जेरी’ को मुस्ताङको मार्फादेखि ढुम्बा तालसम्मको दृष्यलाई समेटिएको छ । ‘मुस्ताङ पछिल्लो समय फिल्म सुटिङ गर्ने लहर बढ्दै गएको छ’–मुस्ताङको जोमसोमस्थित एक्यापका कार्यालय प्रमुख तुलसीप्रसाद दाहालले भने–‘फिल्म र म्युजिक भिडियो खिच्ने बढी आउँछन् ।’
उनका अनुसार वर्षमा २० वटा भन्दा बढी फिल्म सुटिङ गर्न आईपुग्छन् । म्युजिक भिडियोको लागि पनि उत्तिकै आउने गरेका छन् । केही केवल एक दुई मिनेटको सट खिच्नको लागि मात्रै आउनको संख्या यकिन गर्नै सकिदैन् । मुस्ताङमा सुटिङको लािग एक्यापबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण ऐन अनुसार एक पटकको लागि नेपालीलाई १० हजार रुपैयाँ लिईने गरिएको उनले बताए । सार्क मुलुकको लागि १५ हजार र अन्तराष्ट्रिय(तेस्रो मुलुक)लाई १५ सय डलर तोकिएको छ ।
‘कबड्डी’ सिरिज, छिरिङ’ लगायत फिल्म सुटिङ मुस्ताङमै गरिएको छ । घाँसादेखि शुरु हुने मुस्ताङ कोरलानाकासम्म छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले समेत सामान्य म्युजिक भिडियो बनाउने र प्रोमो बनाउनेलाई अनुमगनको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था नै नभएको एक्यापको बुझाई छ । डकुमेन्ट्री फिल्म खिच्नेदेखि स्वीकृति लिएर नै फिल्मको सुटिङ गर्नेको संख्या भने बढ्दै गएको आभाष एक्यापले गरेको छ । ‘तिमी आजभोलि किन बोल्दिनौ’ सुदिप गिरीको यो गीतको म्युजिक भिडियो पनि मुस्ताङमै खिचिएको हो ।
‘फिल्म सुटिङ र डकुमेन्ट्री निर्माणले मुस्ताङलाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याएको छ’ कार्यालय प्रमुख दाहालले भने–‘पर्यटन प्रर्वद्धनँसगै राजस्व समेत बृद्धि भएको छ ।’ मुस्ताङ फिल्म सुटिङ गर्ने निर्माता तथा कालकारलाई ‘भर्जिन ल्याण्ड’ नै हो । हरेक ठाँउ फरक भौगोलिक संरचना छ । मौलिक शैली छ । प्राचीनता छ । इतिहास छ । रहन सहनदेखि भेषभुषा अनि भूबनोट कलात्मक छ । लोमान्थाङमा पनि स्थानीयकै पहलमा ‘आमाखाण्डो’ नामक चलचित्र सुटिङ गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सदस्य इन्द्रधारा विष्टले पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यसहित आफनै लगानीमा ‘लोमान्थाङमै बसम र लोमान्थाङ गाँउ’ नामक दुईवटा गीतको म्युजिक भिडियो बनाएका थिए । ‘पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि लोमान्थाङमै सुटिङ गरिएको हो’ सदस्य विष्टले भने–‘गीतको माध्यमबाट गाँउघरको पहिचान अनि पर्यटन प्रवद्र्धनको अभियान थियो ।’
घाँसै काटेर काठे पुल तरेर ! ( फोटो अफ द डे )
२७ बैशाख २०७८, सोमबार २३:५२